यो पारदर्शी स्क्रीन नवीनतम सैमसंग पेटन्ट हो Androidsis
पारदर्शी स्क्रिनको साथ फोन? सामसु'sको अर्को लक्ष्य
सुरु गर्न, हामी मैदानमा छौं पेटेंटअर्को शब्दमा, यसको मतलब यो होइन र यो डिजाइन मोबाइल फोनको भविष्यको रूपमा देखा पर्नेछ भन्ने कुरालाई मान्नु हुँदैन। जे होस्, केहिसँग छ, तर त्यहाँ केहि पनि लेखिएको छैन, त्यसैले आशा नहुनु राम्रो हो। हो, फोल्डिंग फोनहरू राम्रो बन्दरगाहमा आईपुग्यो र आज तिनीहरू बिक्रीको लागि छन्, तर अहिलेका लागि हामीले अझ बढी पत्ता लगाउनको लागि पर्खनु पर्नेछ पारदर्शी स्क्रीन।
के वास्तवमा पेटन्टहरु को लागी प्रयोग गरीन्छ पत्ता लगाउन को लागी निर्माणकर्ताहरु को अनुसन्धान र विकास विभाग जाँदै छ। र हामी के प्रमाणित गर्न सक्षम छौं, पछिल्लो पारदर्शी स्क्रीन मोबाइल फोनको साथ आउन सामसु'sको महान विचार हो। तर निस्सन्देह, कागजमा सबै कुरा एकदमै सुन्दर र सम्भव देखिन्छ, र योजना अनुसार हामीसँग एकदम पारदर्शी उपकरण छ, जुन सिद्धान्तमा सम्भव छैन।
पक्कै तिनीहरू पारदर्शी OLED स्क्रिनमा शर्त लगाउँछन्
हामीले अघि नै वर्णन गरिसकेका छौं, पेटेन्टहरूले हामीलाई निर्माताहरूले लैजाने मार्गहरू जान्न मद्दत गर्छन्, र यस्तो देखिन्छ कि सामसु transparentसँग पारदर्शी स्क्रिनहरूको अनुसन्धानमा कार्यरत टोली रहेको छ। स्क्रिनको पछाडि क्यामेरा लुकाउन सक्षम हुन केहि समान सिर्जना गरिएको छ। यसको लागि, पारदर्शी तह र एल्गोरिदमहरू प्रयोग गरिएको छ जुनaद्वारा बनेको फोटोलाई पुन: संरचना गर्दछ लेन्स लगभग लुकेको छ, तर सामसु अझ अगाडि जान चाहेको छ।
यसको पारदर्शी स्क्रिनहरूको लागि प्याटेन्ट गत अगस्टमा प्रकाशित गरिएको थियो, यद्यपि यो २०२० को सुरूमा विश्वमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यसले हामीलाई के भन्न खोजेको हो? सामसु्गले यो नयाँ पारदर्शी टर्मिनल प्राप्त गर्न काम गरिरहेको छ। यस्तो देखिन्छ कि यो एन्ड्रोइडको साथ आएको छ, त्यसैले यो ग्यालक्सी परिवारमा सम्बन्धित हुन सक्छ, र यसको डिजाइनहरूले पहिले नै यो देख्दछौं कि यो पूर्ण रूपमा पारदर्शी छ, वा लगभग।
प्याटेन्टले यसलाई प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न तहहरूको वर्णन गर्दछ पूर्ण प्रयोग योग्य पारदर्शी स्क्रीन ग्राफिक्स प्रदर्शन को दृष्टिकोण को रूप मा, को साथ चलिरहेको चित्रहरु, तर सकेसम्म पारदर्शिता राख्दै। के उनीहरूले अझसम्म वर्णन गरेनन् कि कसरी तिनीहरू फोन भित्र समाधान राख्न चाहन्छन्। ठीक छ, यदि स्क्रिन पारदर्शी छ, हामी स्मार्टफोनको भित्री हिसाबले देख्न सक्छौं।
यस्तो देखिन्छ कि यस नयाँ प्याटेन्टको पारदर्शिता अवधारणा OLED प्यानलमा आधारित छ। यो ऊर्जा स्तरमा अधिक किफायती छ, र यसको प्रदर्शन प्यानल अस्पष्ट छैन, तर पारदर्शी छ। एक समाधान जुन सरल देखिन्छ, यद्यपि यसले बाँकी कम्पोनेन्टको समस्या समाधान गर्दैन। सामसुले यसलाई विकासको लागि र फोल्डि un वा अनरोलिling्ग स्क्रिनहरूमा प्रयोग गर्न सक्दछ, जसको एक अन्तमा कम्पोनेन्टहरू हुन सक्छन्। तर अहिलेको लागि, हामी केवल प्याटेन्टको बारेमा कुरा गर्दैछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » पारदर्शी स्क्रिनको साथ फोन? सामसु'sको अर्को लक्ष्य
गुगल पिक्सेलaए अब स्पेनमा सुरक्षित गर्न सकिन्छ